Subsystem somphakathi izingxenye zawo
Umqondo "umphakathi" libanzi futhi zihlukahlukene. Kuyinto isintu sisonke, futhi isigaba esithile ekuthuthukisweni yayo (isib bakudala ohlanganyelwe, sezenhlalo, njll) Umphakathi - i association of abantu, esadaleka ngenxa uhlakaniphile, okunenjongo, wahlela imisebenzi yabo ngokuhlanganyela. Amalungu ayo ukuxhumana okujulile ngakho naseduze, ngokwesibonelo, lapho umphakathi bangempela.
Umphakathi kuyinto iqembu labantu kwesimo abathize (isibonelo, isiFulentshi) noma ububanzi izintshisekelo (isib, ukudoba abathanda). Nokho, ngomqondo ebanzi yezwi libhekisela ingxenye kulomhlaba, e inqubo yokuziphendukela kwemvelo behlukanisiwe nemvelo, kodwa ugcine ubuhlobo obuseduze naye.
Umphakathi libhekene izinhlobo inhlangano ngabanye noma amaqembu, ukuxhumana ubudlelwano babo. Kusekelwe izithakazelo ezifanayo ohlangothini elicacisiwe inkontileka, imihlangano noma amanye amathuluzi. Umphakathi, ngokungafani kuya emphakathini, umthelela encane ushintsho ubuntu ungubani. Ngokuvamile, yilo zisithinta sphere elise phakathi ngabanye kanye isimo.
Ezomphakathi yezenhlalakahle ubudlelwane - eqinisweni imiqondo efanayo kakhulu. Ngomqondo othile singasho ukuthi umphakathi - lena iqoqo bonke ubuhlobo ukuthi kuphakama ngaphakathi kuwo. Kunzima kakhulu, kodwa uhlelo kahle ohlelekile, esibonakala by:
Ziningi subsystems (izindawo) namaqembu omphakathi.
Connections, ubudlelwano, nezinye izinhlobo ukuxhumana phakathi kwamalungu, ezenzeka ngaphakathi nangaphandle uhlelo evaliwe.
Ukuzenzela, okusho ikhono ukudala izimo ezithile ngokuziphanyeka nobumbano.
Alternative ukuthuthukiswa, Dynamics, ukungakwazi ukuthatha uhlamvu ephelele.
Nonlinearity (Ukungaqiniseki) ukuthuthukiswa.
Ngaphezu kwalokho, njenganoma iyiphi uhlelo anokuhambisana, umphakathi izimpawu zobuqotho. Akukhona nje ukufuna isamba izakhi izinyathelo ezingaphezu imikhawulo kanye amathuba izici uhlelo, kuhlanganise nabo bonke ubudlelwano ukuletha abantu ndawonye.
isakhiwo System emphakathini kusho ukuthi umqondo kungenziwa sehlukaniswe tincenye ezincane, okuthiwa "subsystem 'yomphakathi noma nobukhulu bayo.
Iphanorama kwezomnotho sihlanganisa ngokuphelele zonke ubudlelwano eziphakamayo edala, ukusatshalaliswa futhi ukusetshenziswa kwezinto ezibonakalayo. Iqiniso noma isibonelo we subsystem ezomnotho zomphakathi kungaba ukuthuthukiswa uwoyela noma igolide, ukukhiqizwa kwanoma yiphi impahla.
I subsystem zezombusazwe - nesigcino izinhlobo ubuhlobo ezifana isimo-umphakathi, isimo yangaphandle, njll Isibonelo (Eqinisweni) a subsystem emphakathini kubhekwe emsebenzini wokulawula umthetho, siqhuba emikhankasweni yomphakathi, referenda, kanye nemisebenzi yokuphatha isimo.
subsystem Social - uhlobano phakathi amakilasi, izizwe, izinkolo, ubudala ezahlukene, professional kanye kwezinye izingqimba. Amaqiniso: umshado, izinzuzo.
Iphanorama okungokomoya - ubudlelwano azalelwa nokuthuthukisa e inqubo yokudala izindinganiso ezingokomoya, isitoreji yabo, popularization. Izibonelo subsystem yomoya womphakathi: imisebenzi izikhungo zocwaningo, izinhlangano zamasiko, izinhlangano zenkolo.
I namuhla umbuzo ukwenza isifundo esiphathelene nomphakathi ifilosofi yabantu. Umuntu ozilimazayo akasiboni lo mqondo njengoba ubunye ezihlukahlukene izakhi, izingxenye, izingxenye. Bonke kuhlobene futhi kuncikene, ngeke kube khona njengoba ehlukile ingxenye ethathwa (noma imbulunga). Kuyinto lokhu kuxhumana nobudlelwano ukwenza umphakathi oluphelele ukuthi ihlukile kwabanye (isib, begazi) eziyinkimbinkimbi kakhulu ngaphezulu.
Kunganjani bangcwabe Lenin: Izimbangela Nezingozi amaqiniso athakazelisayo
EYekaterinburg Eminyuziyamu: incazelo, ukubuyekezwa, intengo. Ekaterinburg Museum of Fine Arts
Yini ngonyaka ngokohlelo lwezikhathi Muslim. I Muslim ikhalenda ikhalenda
Kungani ngidinga diode laser
Ifayela "msvcr100.dll" - kuphi ukuphonsa nokuthi ungafaka kanjani?
Nenkabazwe kwesokudla ubuchopho, imisebenzi kanye nentuthuko
Isilinganiselwa ngoba amabhange SP: lapho kangcono ukuvula i-akhawunti
Terzhinan (amakhandlela). Yokusetshenziswa
Nicholas Yokuqala. Ukubusa kanye nenqubomgomo yasekhaya
PPC - kuyingcenye eqakatheke kakhulu imoto
Ukumnika apholisayo 5 infusions. Ukwakheka, ukulungiselela, ukusetshenziswa